Idulọ ọrụ na-egbu ọgwụ na-egbu egbu - China Pesticide Residuces Manufacturers, Suppliers
DRK-860 Multi-oke oke Nchọpụta Nchedo Nri
Multi-oke nchekwa nchekwa nri zuru oke nakweere spectrophotometry, dịka ụkpụrụ mba dị mkpa si dị, nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa nke pidide pesticide, formaldehyde, sọlfọ dioxide, nitrite, nitrate, wdg na nri. O kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ngwaahịa akọrọ, mmiri Inspecti
DRK-880 18-Channel Nchọpụta Pesticide Residue Detector
Multi-oke nchekwa nchekwa nri zuru oke nakweere spectrophotometry, dịka ụkpụrụ mba dị mkpa si dị, nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa nke pidide pesticide, formaldehyde, sọlfọ dioxide, nitrite, nitrate, wdg na nri. O kwesịrị ekwesị maka mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, ngwaahịa akọrọ
DRK-900 96-Channel Pesticide nke fọdụrụ Rapid Tester96
Ihe na-egbu pesticide ngwa ngwa na-anabata usoro mgbochi enzyme ma mee ka ọwa 96 n'otu oge ahụ. Ejila ya mee ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ nnwale nke mbụ nwere nnukwu nnwale dị ka ntọala ngwaahịa mmepụta ọrụ ugbo na ebe nyocha ọrụ ugbo.
DRK-900A 96dị 96-Channel Multifunctional Meat Safety Tester
Enwere ọtụtụ ọwa nchọpụta, ọsọ ọsọ ọsọ na oke ziri ezi. A na-ejikarị ya eme nchọpụta nke ọgwụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na anụ ahụ (akwara, imeju, wdg)
DRK-880A 18-Channel Dete Safety etechọpụta Ihe
N'ikwekọ n'ụkpụrụ mba dị mkpa, ọwa mmiri na-achọpụta ihe oriri zuru oke nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa pesticide, formaldehyde, akpụ ọcha, sọlfọ dioxide, nitrite, nitrate, wdg.
Ihe nyocha nke pesticide fọdụrụ ngwa ngwa, na-eji usoro mgbochi enzyme, dịka ọkọlọtọ mba GB / T5009.199-2003 na ọkọlọtọ NY / 448-2001, nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa pesticide nke ule a nwalere.
DRK-120 Pesticide fọduru Ndenye Tester
Ihe nyocha nke pesticide ngwa ngwa dị obere, dị mfe ibugharị, nke batrị lithium nwere nnukwu ikike, enweghị nhazi nhazi, nyocha ngwa ngwa, ọnụ ala, ọkachasị maka ụlọ ọrụ nyocha ngwaahịa, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na ụlọ ndị ọkachamara. befor